China Isostatic Kudzvanya graphite Zvidhinha Mugadziri uye Mutengesi | Jinglong
Isostatic Kupfuurira Graphite Zvidhinha
Isostatic Pressing Graphite irudzi rutsva rwe graphite zvinhu zvakagadzirwa muma1940 aine akateedzana ezvakanakisa zvivakwa. Isostatic Kudzvanya graphite ine yakanaka kupisa kuramba. Inert gasi, simba rayo rinogadzirwa rinowedzera pamwe nekuwedzera kwetembiricha, ichisvika pakakwirira kukosha painenge 2500 ℃ .Ichienzaniswa neyakajairika graphite, chimiro che isostatic graphite chinowirirana, chisina kusimba, uye chakaenzana.
Iyo yekupisa yekuwedzera coefficient yakanyanya kuderera, ayo thermal kuvhundutsa kuramba kwakanyanya, uye yayo isotropic, chemakemikari ngura kuramba yakasimba, zvakadaro, ine yakanaka yekupisa uye yemagetsi conductivity uye yakanakisa machining mashandiro. Isostatic Pressing Graphite Blocks inogona kushandiswa kuEDM graphite electrode, kurapwa kwemvura, kuitisa electrode, anode cathode graphite block, electrolytic graphite electrode, uye lubrication zvinangwa. Yedu graphite block ine hunhu hweyakakwira-vhoriyamu density, yakaderera resistivity, oxidation kuramba, ngura kuramba, yakanyanya tembiricha kuramba, yakanaka conductivity, nezvimwe.
Zvirinani Homogeneity: zvirinani zvinhu homogeneity zvinoreva hupenyu hwakareba hurefu uye kudzikama kuramba kuramba kutonga kwekupisa zvinhu.
Kukura kukuru: isu tinokwanisa kupa matombo akaenzana akakura se2150 * 1290 * 500mm uye mabhuru anotenderera akakura seD1450 * 1200mm & D1100 * 1200mm. saizi yegumi 10um
Yakachena kuchena: Pamusoro pechikumbiro chevatengi, isu tinogona kupa zvigadzirwa nemadota zvemukati zvisingasviki 20ppm / 30ppm. Kune semiconductor uye kumwe kunyorera, iyo dota yezvinhu inogona kudzorwa isingasviki 5ppm.
Thermal Kuitisa （100 ℃)
Coefficient yekupisa kwekuwedzera (Indoor Tempreture -600 ℃)
kuita zvinhu zvakasiyana-siyana
Kuramba kukanda, sintering, yakanyanya tembiricha Kudzingwa
Pashure: Graphite zvikamu zvekutsvaira choto
Zvadaro: Isostatic Kupfuurira Silicon Carbide Graphite Kukuru Mukutonga kwechiFascist: